Asithena - izithelo ezomisiwe ewusizo kakhulu. It sigcina ngokugcwele wonke umsoco, okuhlanganisa izithelo fresh. Asithena aqukethe eningi yensimbi, ngakho wusizo igazi. It has izakhiwo laxative. Kunconywa ukuba senhliziyo, umdlavuza iziguli, abantu ngokuhlala ukucindezeleka. Amazing umkhiqizo evusa ithoni, kuthuthukisa nemizwelo.
No kancane ewusizo futhi walnuts. Isithelo saso amaphesenti kuphela 5 emanzini, futhi lonke mass ewela amafutha enempilo, ukudla okumahhadla namaprotheni.
Salad nge walnuts kanye asithena Kunconywa amadoda ukulondoloza potency, kusekela ithoni isikhumba kwabesifazane, kuyasiza ukunciphisa umzimba.
Ngaphezu kwalokho, kokubili imikhiqizo aphrodisiacs kakhulu, ngakho iyiphi usuku romantic Ungakwazi ukuhlobisa isaladi nge walnuts kanye asithena.
Ukuze ekuwulungiseleleni ka amapulamuzi omisiwe udinga ukususa amathambo uma sesomile kakhulu, uthele amanzi abilayo imizuzu embalwa, iwayini ashisayo noma brandy. Khona-ke ngawakhamela, nquma, engeza ziyadliwa yashizi. Ukuze pepper elungisiwe ungakwazi, uligcwalise yogurt lula noma iconsi ukhilimu. isaladi Ejabulisayo Alungile walnuts.
nezinye isaladi ingalungiswa kuthebula iholide. Asithena, walnuts exutshwe abilisiwe, beet ogayiwe. Ungagcwalisa imayonnaise, ukhilimu, ukhilimu omuncu noma yogurt, bese wengeza kobukhulu garlic, pepper.
Walnut is kuhlangene inkukhu inyama. izindlela eziningi, bonke bangabafowabo ezahlukene kakhulu. Ungakwazi ukupheka izitsha main, amasobho, kodwa bafuna-okubabayo kakhulu, kungenzeka lokhu isaladi. Inkukhu, ziyadliwa, omunye iklabishi ikhanda Chinese, nedlanzana uphayinaphu okusemathinini, 200 of ushizi, amaqanda 4, isigaxana sikagalikhi, ama ezimbili - yilokho iyadingeka ukuze ekuwulungiseleleni. Amaqanda inkukhu ukupheka, futhi Fry anyanisi in ibhotela. Ngoqwembe embondelene zamatshe Engxenyeni yokuqala inkukhu lisikiwe phezu - anyanisi nesweli, bese ingxenye ye ushizi vukuza, uphayinaphu, imibengo iklabishi Chinese, amaqanda. Khona-ke izingqimba aphindaphindwe ukuze ushizi noma amaqanda ogayiwe babe phezulu. Ngamunye ungqimba ulethisi embozwe imayonnaise noma yogurt, kanye ungqimba wokugcina ehlotshisiwe uphayinaphu tincetu. Kulesi iresiphi, ungakwazi shintsha uphayinaphu asithena: uthole ukunambitheka ezahlukene kakhulu kodwa akukho ngaphansi elicwengiwe.
Salad nge walnuts - akulona isidlo kuphela elingakwazi ukuhlobisa itafula zemikhosi. Ezweni lethu, ezidumile ikakhulukazi isidlo Georgian sacivi Inkukhu nge walnuts. Ngaye, kuzomele uqale ukulungiselela sauce in a blender. Ukuze kuzodinga:
400 amagremu walnuts
iqanda elilodwa zokusetshenziswa
ugongolo cilantro, parsley
ikhanda enkulu garlic
ama ezimbili, pre-ethosiwe in ibhotela
usawoti kanye pepper
Zonke imikhiqizo phansi kuze, baze babe mass iyunifomu obukhulu. Lokho akusiyo obukhulu kakhulu, ungakwazi ukwengeza umhluzi lapho inkukhu kuphekwe.
Thela ukulungele inkukhu sauce izingxenye pre-kuphekwe, wagqoka umlilo kancane. Ukuvusa njalo, uvumele ukuba nithele, bese hlukanisa endaweni efudumele. Ngemva kwamahora amathathu, lapho isidlo ukumisa ngokwabo kanye sauce sikhula, sacivi ongakhonza.
Salad nge walnuts, inkukhu, emhlophe - a injabulo yeqiniso ngoba gourmets. Ukupheka phezu izingqimba isidlo sokuqala ukusakaza yashizi beet kuphekwe ke inkukhu, abilisiwe amaqanda namabhomu. Imikhiqizo kusendlalelo ngasinye (ngaphandle garnet) premixed nge garlic, imayonnaise noma iyogathi. Salad abafafazwe walnuts oqoshiwe, ehlotshiswe imbewu emhlophe.
Ungakwazi ukupheka ezinye isaladi engavamile. Izinhla abekwa isidlo ngaphambilini comminuted, exutshwe imayonnaise
amaqanda nge garlic
ukunambitheka UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki isaladi, emseni wakhe, unciphise Omuny aphumelele umpheki enhle kakhulu.
Salad zezinhlanzi abilisiwe: original zokupheka